बंगलादेश क्रिकेटमा कप्तान परिवर्तन, कसले पाए जिम्मेवारी? - Everest Dainik - News from Nepal
बंगलादेश क्रिकेटमा कप्तान परिवर्तन, कसले पाए जिम्मेवारी?
काठमाडौं, साउन ४ । बंगलादेश क्रिकेट टिममा कप्तान परिवर्तन गरिएको छ । नियमित कप्तान मसरफे मुर्तुजा घाइते भएपछि श्रीलंकाविरुद्धको सिरिजका लागि तमिम इकबाललाई कप्तान बनाइएको छ ।
बंगलादेश क्रिकेट बोर्डका अनुसार मीरपुरमा भइरहेको ट्रेनिङमा मुर्तुजा घाइते भएपछि इकबाललाई अन्तरिम कप्तानको रुपमा श्रीलंका पठाइएको हो । यस सिरिजमा शाकिब अल हसन र लिटन दासलाई विश्राम दिइएकाले पनि इकबालले कप्तानी गर्ने मौका हुन् ।
याे पनि पढ्नुस नेपालको दोस्रो विकेट पतन, आज पनि टिक्न सकेनन् कप्तान मल्ल
यस्तै अर्का अलराउण्डर मोहम्मद सैफुद्दिन पनि घाइते भएकाले उनी पनि श्रीलंका जान पाएनन् । मोर्तजा र सैफुद्दिनको ठाउँमा टास्किन अहमद र फरहाद राजाले मौका पाएका छन् । बंगलादेशले श्रीलंकाका तीन वटा एक दिवसीय खेल खेल्नेछ । सिरिजका तीन वटै खेल कोलम्बोको आर प्रेमदासा स्टेडियममा हुनेछ ।
याे पनि पढ्नुस क्विन्टन बने दक्षिण अफ्रिकाका वानडे कप्तान
बंगलादेश टिमः तमिम इकबाल (कप्तान), सौम्य सरकार, मोहम्मद मिथुन, अनामुल हक, मुश्फिकुर रहिम, महमुदुल्लाह, मोसाद्दिक होसन, सब्बीर रहमान, फरहाद राजा, मेहिदी हसन मिराज मुस्तफिजुर रहमान, रुबेल हुसेन, टास्कीन अहमद र तैजुल इस्लाम
ट्याग्स: कप्तान, बंगलादेश क्रिकेट टिम